संस्करण 0.6.5 – अब कम bugs सुविधाहरु
अक्टोबर 26, 2010 द्वारा Ofer 8 प्रतिकृयाहरु
त्रुटिहरू - gotta तिनीहरूलाई प्रेम
संस्करण 0.6.5 केही bugs दबाउनुको मा केन्द्रित छ (र केही regressions पनि). यो हामी आज जारी गरेको छ कि अझै सम्म सबै भन्दा स्थिर र सबै भन्दा राम्रो सफ्टवेयर हो. यो पनि समर्थन यसो भन्छन् खोज इन्जिन को लागि केही हेडर जादू.
यहाँ परिवर्तन लग समीक्षा Lets:
Anphicle द्वारा रिपोर्ट स्थिर स्लोभेनियाली झण्डा बग (यो अघि सियरा लियोन थियो, तेज आँखा लागि धन्यवाद!).
मार्को द्वारा रिपोर्ट निश्चित बाटो WordPress संग एक मुद्दा प्रमाणिक रिडिरेक्टहरू र url rewritings संभालती, WordPress हामी ट्याग र श्रेणी prefixed urls अनुवाद र त्यसैले पूर्वनिर्धारित भाषा url तिनीहरूलाई पुन: निर्देशित बाटो को कुनै ज्ञान थियो. यो ठीक पनि केही URLs को एक प्रमाणिक फारम सुधार.
सबै अनुवाद र काम गर्ने क्षमता बाधा जो पोस्ट अनुवाद पछि एक बग निश्चित – (धन्यवाद nightsurfer [टिकट #122]) – हामी पनि एक पुनर्प्रेषित को सट्टा एक मेटा प्रयोग गर्न अनुवाद सबै जानकारी पारित कारोवारहरू सुधार गर्न समय लिएर.
BuddyPress धारा मुद्दा लागि स्थिर json अनुवाद – (धन्यवाद Inocima [टिकट #121]).
अब हामी हाम्रो trac प्रणाली मा एक सफाई मा काम गर्दै छन्, नयाँ मील को पत्थर लागि खुला टिकट खटाएर. सकेसम्म छिटो छिटो तपाईं गर्न सक्छन् हाम्रो लागि नयाँ टिकट सिर्जना गरेर यो प्रयास निराशाजनक बनाउन प्रयास गर्नुहोस्.
अनि रूपमा सधैं – यस संस्करण को आनंद.
न्यून दायर: विज्ञप्ति घोषणा संग Tagged: BuddyPress, बग सुधार, झण्डा sprites, लघु, जारी, यस